Kutheni le nto kufuneka usebenzise isiCwangciso seNtengiso seVidiyo ngo-2015 Martech Zone
Kutheni le nto kufuneka usebenzise isiCwangciso seNtengiso seVidiyo ngo-2015
NgoLwesihlanu, Matshi 20, 2015 NgoLwesihlanu, Matshi 20, 2015 Douglas Karr
IiVidiyo ngoku ziyenza kunxibelelwano ngalunye olusenza kwi-Intanethi. Ukusukela ekusungulweni kokutya kwevidiyo kwi-Twitter nge IMeerkat, ukuthandwa okuqhubekayo kwevidiyo kuFacebook naku-Instagram, kunye nokufikeleleka kwencazelo ephezulu yevidiyo kwizixhobo eziphathwayo. Ngapha koko, isiqingatha sazo zonke iitrafikhi zevidiyo ngoku sihanjiswe kwifowuni okanye ithebhulethi- kukukhula okumangalisayo.
Kwaye ayisiyiyo nje ukuba iividiyo zithandwa okanye ziqhutywa ngumthengi. Ngaphezulu kwe-80% ye Abaphathi abaphezulu babukela ividiyo ngakumbi kunokuba benzile kunyaka ophelileyo nakwiikota ezintathu ze Abaphathi babukele iividiyo ezinxulumene nomsebenzi qho ngeveki! Kwaye banikwe ukhetho, iipesenti ezingama-59 zabaphathi ndingathanda ukubukela ividiyo kunokuba ufunde inqaku. Ke nokuba uyinkampani ye-B2C okanye ye-B2B, ividiyo ibalulekile kwisicwangciso sakho sentengiso yedijithali.
Ukuba neevidiyo zonyusa amaxabiso avulekileyo, zonyusa amaxabiso okucofa, kwaye zinciphise ukungabhalisi kumaxabiso kwintengiso ye-imeyile. Iividiyo zifunyenwe zisebenza ngabathengisi ngokwazisa ngebrand, ukuvelisa okukhokelayo kunye nokuzibandakanya kwi-Intanethi. Ukuthengiswa kwevidiyo kuye kuthandwa kakhulu kwaye kuyasebenza kangangokuba i-HighQ sele ithiye igama 2015 Unyaka weNtengiso yeVidiyo!
EphakamileyoQ inikeza iqonga lokusebenzisana, ukupapasha, igumbi ledatha kunye nezisombululo zenkuthalo zeshishini.
tags: Ividiyo evakalayoIvidiyo ecacisayoUkuthengisa ividiyooopopayi bevidiyoukuthengisa ividiyoukufikelela kwevidiyoWyzowl
Eyona migqaliselo ibiza kakhulu yokuKhangela kwi-Bing- kunye nendlela yokuBaphepha
Kutheni le nto abantu beyekile ukulandela uphawu lwakho?
Nov 7, 2014 kwi-11: 38 AM
Umzobo wolwazi olumangalisayo kukuqonda ukusebenza kweentengiso zevidiyo kwaye yonke into ichazwe ngokugqwesileyo nangokulula. Ke ndiqinisekile ukuba ngokwazisa olu lwazi graphic wonke umntu uya kuqonda ukuba kutheni ukuthengisa ividiyo kubalulekile kwishishini kwaye kutheni intengiso yevidiyo inyuka mihla le. Ke enkosi uDouglas ngokuveza ulwazi oluhle kangaka kwaye ndiyathemba ukuba olu hlobo lwegraphic yolwazi oluncedo luya kubonakala rhoqo :)
Ngomhla wama-18 ku-Disemba 2014 ngo-9: 44 AM
Indlela eyoyikekayo yokwabelana ngolwazi lwakho kunye nemizobo yolwazi.
Mar 22, 2015 ngo 4:21 PM
Ndiceba ukuqala nokuzisa iividiyo zabafundi bam. Ndibhidekile ngeziphumo, kodwa ngubani owaziyo. Kufuneka ndizame! Le infographics iyasebenza.